खडेरी को हो र यसले के असर गर्छ? | नेटवर्क मौसम विज्ञान
खडेरी को हो र यसले के असर गर्छ?
हामीले यस बारे धेरै कुरा सुनेका छौं खडेरी, एक शब्द जुन ग्रहको तापक्रमले बढ्दै जान्छ, हामी प्रायः त्यस्ता स्थानहरूमा प्रयोग गर्दछौं जहाँ वर्षा कम भइरहेको छ। तर यसको खास अर्थ के हो भने के कुनै खास क्षेत्रमा खडेरीको असर परेको छ? यसले कस्तो असर पार्छ र त्यसले कस्तो नतिजा लिन सक्छ?
यस मुद्दामा अन्वेषण गरौं कि हामी सबैलाई यति धेरै असर गर्न सक्छ।
1 खडेरी भनेको के हो?
2 त्यहाँ कस्ता प्रकारका छन्?
3 यसको नतिजा कस्तो हुन्छ?
4 सबैभन्दा खडेरी कहाँ हुन्छ?
खडेरी भनेको के हो?
यो एक छ ट्रान्जिटरी मौसमविरूद्ध विसंगति जसमा पानी बोटबिरुवा र जनावरहरूको आवश्यकता आपूर्ति गर्न पर्याप्त छैनमानव सहित, जो यो विशेष ठाउँमा बस्छन्। यो एक घटना हो जुन मुख्य रूपमा वर्षाको अभावले गर्दा हुन्छ, जसले हाइड्रोलोजिकल सुक्खा निम्त्याउन सक्छ।
त्यहाँ कस्ता प्रकारका छन्?
त्यहाँ तीन प्रकारका छन्, जुन:
मौसमको खडेरी: यो तब हुन्छ जब वर्षा हुँदैन वा यो धेरै थोरै वर्षा हुन्छ - निश्चित समयको लागि।
कृषि खडेरी: क्षेत्र मा बाली उत्पादन को असर गर्छ। यो प्राय: वर्षाको अभावका कारण हुन्छ, तर यो नियोजित कृषि गतिविधि द्वारा पनि हुन सक्छ।
जलविरूद्ध खडेरी: यो उपलब्ध हुन्छ जब उपलब्ध जल भण्डार औसत भन्दा कम हुन्छ। सामान्यतया, यो वर्षाको अभावका कारण हुन्छ, तर मानिस पनि प्रायः जिम्मेवार हुन्छन्, जस्तो अरल समुद्रको साथ भयो।
यसको नतिजा कस्तो हुन्छ?
पानी जीवनको लागि अत्यावश्यक तत्व हो। यदि तपाईंसँग यो छैन भने, यदि खडेरी धेरै तीव्र वा लामो समयसम्म चलेको छ भने, नतिजा घातक हुन सक्छ। सब भन्दा कमन्सहरू हुन्:
कुपोषण र डिहाइड्रेशन।
वासस्थानमा क्षति, जसले अपूरणीय रूपमा जनावरहरूलाई असर गर्दछ।
धुलो आँधीबेहरी, जब यो मरुभूमि र क्षति ग्रस्त क्षेत्र मा हुन्छ।
प्राकृतिक संसाधनहरु मा युद्ध संघर्ष।
सबैभन्दा खडेरी कहाँ हुन्छ?
प्रभावित क्षेत्र मूलतः ती हुन् अफ्रिका को हर्न, तर खडेरी पनि मा पीडित छ भूमध्य क्षेत्रमा क्यालिफोर्निया, पेरूर भित्र क्वीन्सल्याण्ड (अष्ट्रेलिया), अन्यहरू बीच।
यसैले खडेरी ग्रहमा हुने चिन्ताको विषय हो। केवल पानी राम्रोसँग प्रबन्धन गरेर हामी यसको नतिजा भोग्नबाट बच्न सक्छौं।
लेखको पूर्ण मार्ग: नेटवर्क मौसम विज्ञान » मौसम घटनाहरू » सुख्खा » खडेरी को हो र यसले के असर गर्छ?
पतन २०१ cur जिज्ञासाहरू
ग्रहको सबैभन्दा न्यानो ठाउँ के हो?